नेपाल लाइभ बुधबार, चैत १९, २०७६, १०:२५
काठमाडौं- कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्नका लागि आम मानिसले सामाजिक दुरी कायम राख्न आग्रह गरिएको छ। धेरै हदसम्म यसलाई पालना पनि गरिएको छ। तर नवजात शिशुको स्याहार र दूध चुसाउने अवस्थाका आमाले एक अर्कामा सामाजिक दूरी कायम गरेर शिशुलाई कसरी दूध चुसाउने?
पोर्चुगलमा नवजात शिशुलाई आमाले दूध चुसाउनु हुँदैन भनेर गरिएको त्यहाँका स्वास्थ्य संस्थाले प्रतिबन्ध नै लगाएको एक समाचार संस्थाका पत्रकारले उल्लेख गरेका छन्। संक्रमण फैलँदो यो अवस्थामा आमाले बच्चालाई दूध चुसाउनु हुन्छ कि हुँदैन? यो प्रश्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले आयोजना गरेको मिडिया ब्रिफिङमा लुजा न्युज एजेन्सी पोर्चुगलका पत्रकार एन्टोनियोको हो। अब पढौं एन्टोनियोको प्रश्न र डब्लुएचओकी जनस्वास्थ्यविद् डा म्यारिया भान केरखोभको उत्तर (भिडियोको ९ मिनेट १५ सेकेन्ड देखि १० मिनेट ४० सेकेन्डसम्म)।
एन्टोनियो : नवजात शिशुको स्याहार र शिशुलाई दूध चुसाउने विषयसँग मेरो प्रश्न सम्बन्धित छ। मेरो देश पोर्चुगलका धेरै स्वास्थ्य संस्थाले नवजात शिशुलाई आमाको दूध चुसाउन प्रतिबन्ध गरेका छन्। कोरोना संक्रमणको महामारी भएको यो समयमा नवजात शिशु र आमाबीच सम्पर्क कायम नराख्न विषयमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको कुनै सुझाव छ?
यो प्रश्न सुनिसकेपछि डब्लुएचओको जनस्वास्थ्यविद् डा म्यारियाले माइक मिलाइन्। अन गरिन्। अनि उत्तर दिन सुरु गरिन्। उनको उत्तर चाँहि यस्तो छ।
डा म्यारिया : प्रश्नका लागि धन्यवाद। क्लिनिकल व्यवस्थापनलगायतका विषयमा डब्लुएचओले हालै केही गाइडलाइन पनि जारी गरिसकेको छ। यसमा गर्भवती महिला र दूध चुसाउँदै गरेका आमाका विषयमा पनि उल्लेख छ। महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने भर्खरै प्रसूति भएका र दूध चुसाउँदै गरेका आमाले पनि शिशुलाई दूध चुसाउने क्रमलाई निरन्तरता दिन सक्छन्। तर यसका लागि सचेतता भने अपनाउनै पर्ने हुन्छ। सुरक्षित भएर आमाले बच्चालाई दूध चुसाउन सक्छन्।